Amathiphu we-Baccarat - UK 2021 ✅
Home » Imidlalo Yekhasino » I-Baccarat » Amathiphu we-Baccarat
I-Baccarat Tip No. 1- Khohlwa Ngophawu
Baccarat Ithiphu No. 2- Ukubheja ku-Banker
Iseluleko se-Baccarat No. 3- Namathela ku-Banker Kuze Kukuhlule
I-Baccarat Ithiphu No. 4- Linda Umphumela Owengeziwe Omunye Ngemuva Kokulahlekelwa Nebhange
I-Baccarat Tip No. 5- I-Tie Ayibalwa
I-Baccarat Tip No. 6- Landela Umdlali Kuze Kukwenze Ngehluleke
I-Baccarat Ithiphu No. 7- Qaphela iMini-Baccarat Yakho
I-Baccarat Tip No. 8- Hlakanipha Lapho Kufika Ekulawulweni Kwemali
Sekuyiminyaka, umdlalo we-baccarat uhlakulele lowo moya wobuciko nobubodwa. Amabhayisikobho abandakanya ukuxhashazwa kukaJames Bond awasizi ngalutho njengoba aze asiza nokwakha uphawu lomdlalo wetafula njengomunye wemidlalo enhle kakhulu ongayidlala. Futhi njengoba umdlalo wawuthatha umoya wobuciko, abadlali abaningi bacabanga ukuthi umdlalo kunzima ukuwudlala. Yebo, umdlalo we-baccarat ungadlalwa ezindaweni ezinesithunzi nasezindaweni zokudlalela, kepha akusho ukuthi awukwazi ukudlala lo mdlalo ngendlela entofontofo. Uma umusha kulo mdlalo futhi ufuna ukwandisa amathuba okuwina umklomelo ophezulu, lapho-ke siphakamisa ukuthi ubheke la macebiso alandelayo achazwe ngezansi.
Kunemiphumela emithathu noma ukubheja okungenziwa etafuleni le-baccarat- ungabheja kuMdlali, oBhange kanye noThayi. Kulokhu, imiphumela emibili noma ukubheja kufaka umkhawulo ophansi wendlu ongakusiza. IBhange liqukethe onqenqemeni lwendlu olungu-1.06%, kanti isandla soMdlali sine-1.24% yendlu. Lokhu kusho ukuthi ungalahlekelwa ngamayunithi ayi-1.06 ngamayunithi ayi-100 adlalwe Esandleni seBhange. Futhi uma udlala uhlangothi loMdlali, ungalindela ukulahlekelwa amayunithi wokubheja angu-1.24 kuwo wonke amayunithi ayi-100 adlalwayo. Manje, ake sikhulume ngokubheja kukaTie. Ubuwazi ukuthi umkhawulo wendlu woThayi ubalwa ngo-14.4%? Ngakho-ke uma udlala amayunithi okubheja ayi-100 ngosuku, kufanele ulindele ukulahleka kwamayunithi angama-14.4. Uma ufuna ukuthuthukisa amathuba akho wokuwina kumdlalo we-baccarat, lapho-ke sincoma ukuthi ushiye u-Tie.
Uma sizokuyeka ukubheja kuThayi, lapho-ke kufanele uyibeke kuphi imali yakho? Uma uthatha uhambo lwakho lokuqala lokuya etafuleni le-baccarat, ukubheja kokuqala nokubaluleke kakhulu okufanele ukwenze kufanele kube ku-Banker. IBanker yenza umsebenzi wenziwe, futhi izophumelela ngaphezulu kancane kuka-50% wesikhathi. Manje ukulungisa lokhu, umdlali owinile kulindeleke ukuthi akhokhe ikhomishini ka-5%.
Abadlali abanesipiliyoni bayalazi inani lamathrendi nemizila. Uma uqaphela ukuthi iBhange lihamba ngomugqa (noma umphumela weBhange uqhubeka uphuma), ngakho-ke kungcono ukunamathela ngale ndlela. Kepha khumbula ukuthi i-streak izoqhubeka ngokungapheli. Ngesinye isikhathi, kuzophela. Ukulungiselela lesi simo, ungahle uthande ukuphatha nokulawula amanani akho wokubheja.
Uma kune-streak ye-Banker futhi iyeka ngokungazelelwe, impendulo ejwayelekile ukubheja kuMdlali. Ukuze wandise izingqinamba zakho zokuwina, udinga ukulinda esinye isinqumo noma umphumela ngaphambi kokwenza ukubheja okuhlukile.
Kungcono ukubuka izibopho njengokumane ‘kube yisikhashana’ esenzweni, noma ikhefu ngokulandelana kwemiphumela yeBhange noMdlali. Uma ubhekene neBanker, Banker kanye noTie, qiniseka ukuthi awunaki uTie. Ukubheja kwakho kufanele kube njalo kumdlali.
Nasi isimo esisodwa okufanele sikwenze ucabangisise isu lakho. Uma iBhange liphumelela uMdlali, ungalindi omunye umphumela ukwenza isinqumo sokubheja. Lapho nje uMdlali ehlulwa yiBhange, beka imali yakho esandleni soBhange. Futhi uma kwenzeka ilahleka, bheka Ithiphu No. 3.
Itafula le-mini-baccarat lingahle libe lincane futhi livumele ukubheja okuncane kepha futhi kuza nezinkinga eziningi. Kunokwehluka okubili okubucayi phakathi komdlalo ojwayelekile we-baccarat ne-mini-baccarat. Okokuqala, ngumthengisi osebenzisana namakhadi. Futhi okubili, i-mini-baccarat inikeza uhlobo olusheshayo lomdlalo. Ngokwesilinganiso, abadlali bangabhekana nezinqumo ezingafika ku-200 njalo ngehora. Ukubheja kuphansi lapha, kepha uma ubhekene nezinqumo ezingama-200 ngehora, umonakalo ungaba buhlungu uma kungelona usuku lwakho. Uma uzodlala i-mini-baccarat, lapho-ke kufanele ugxile ekubhejeni kweBanker ize ilahlekelwe.
Lo mthetho empeleni uyiqiniso cishe kuzo zonke izinhlobo zemidlalo yasekhasino, kufakwe i-baccarat. Uma ubhekene ne-streak elahlekile, kungcono ukuthi umise ukudlala kwakho bese uphefumula. Kunezindlela ezahlukahlukene zokuthi ungakhululeka kanjani futhi ususe ingqondo yakho etafuleni le-baccarat. Isibonelo, ungahamba kancane noma ukhulume nomngani wakho. Futhi, uma uzuze inani elifanele, cabanga ukushiya itafula. Kungcono ukuqeda ubusuku ngemali encane yokuwina kunokulahlekelwa yikho konke.
Umdlalo we-baccarat ungabonakala ubukekayo futhi uyinkimbinkimbi kepha empeleni kumnandi futhi kulula ukuwudlala
Enye yezindlela ezinhle zokwandisa amathuba akho wokuwina umdlalo we-baccarat ukufunda nokukhumbula izeluleko ezimbalwa
Elinye lamathiphu athandwa kakhulu ukuhamba ne-Banker’s Hand nokungawunaki uTie. IBanker inikeza indlu onqenqemeni lwe-1.06% ngenkathi iTie ifaka onqenqemeni lwendlu olungu-14.4%